जब पूर्वसभामुख घर्तीलगायत चढेको प्लेन नउडी धावनमार्गमा गुडिरह्यो... :: Setopati
जब पूर्वसभामुख घर्तीलगायत चढेको प्लेन नउडी धावनमार्गमा गुडिरह्यो...
नारायण खड्का दाङ, माघ ११
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा मतदान गर्न दाङ आएकी पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती निर्वाचन सकेर शुक्रबार बिहानै दाङस्थित टरिगाउँ एयरपोर्टमा पुगिन्। उनको ८:४५ बजेको काठमाडौं फर्किने फ्लाइट थियो।
उनी प्लेन चढिन्। प्लेन स्टार्ट पनि भयो। धावनमार्गमा गुड्यो पनि। प्लेनका सदस्यले घर्ती लगायत विमान भित्रका यात्रुलाई स्वागत गर्दै चकलेट बाँडे। घर्तीले चकलेट खाइसकेकै थिइनन्। प्लेन उडेन, धावनमार्गमा गुडिरह्यो।
उड्नुपर्ने प्लेन फेरि पहिले गुडेकै ठाउँमा आएर पार्किङ भयो। त्यसपछि विमानका कर्मचारीले घोषणा गरे- प्राविधिक कारणले प्लेन उड्न सक्दैन। प्लेनको एउटा पंखा नै नचलेको हुँदा उडान हुन नसकेको भन्ने जानकारी पूर्वसभामुख घर्तीलाई चालक दलका सदस्यले अवगत गराए। उनी अर्को प्लेन कुर्न विमानस्थलमै बसिन्।
उता विमान यात्रुको प्रतीक्षालयमा घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १४ की केशरी अधिकारी ऐया आत्थु गर्दै छटपटाइ रहेकी थिइन्। उनी पति हुमकान्तसँग उपचारको लागि पूर्वसभामुख घर्ती उड्न लागेकै प्लेनमा काठमाडौं जान बिहानै एयरपोर्ट आएकी रहिछन्।
दाँत र पेटकी बिरामी केशरी चक्कर लागेर भुइँमा बसेकी थिइन्। बान्ता हुन थालेपछि बाहिर दौडिन्थिन्। बिरामी पत्नीको अवस्था नियाली रहेका हुमाकान्त चिन्तित देखिन्थे।
‘मेरी पत्नीको अवस्था गम्भीर भयो भने त्यसको जिम्मेवारी के सरकारले लिन्छ?,’ हुमाकान्तले प्रश्न गरे ‘यस्तो दुर्दशायुक्त रूपमा एयरपोर्ट चलाउँदा सारा दंगालीले दुःख भोग्नु परेको छ।’
त्यतिखेर दिउँसोको २ बजिसकेको थियो।
उनले राज्यले गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत नगरेको भन्दै आक्रोश पोखे।
‘कमसेकम यो एयरपोर्टको धावन मार्ग विस्तार गरेपछि ठूला प्लेन चल्थे र यात्रुले दुःख पाउने थिएनन्।’
राज्यसँग पैसा नभए जनतासँग उठाउन सक्ने उनले तर्क गरे।
उनले आफूहरूको पालामा मन्दिर, क्याम्पस र विश्वविद्यालय स्थापना गर्दा पैसा संकलन गरेर वा जग्गा दान गरेर ती स्थापना गरेको स्मरण गरे।
‘पञ्चायत कालमा हुने विकास आज नहुने हुन्छ,’ अधिकारीले भने, ‘राज्य सञ्चालकहरूको इच्छा शक्ति नै नभए यस्तो भएको हो।’
काठमाडौंबाट अर्कै प्लेन आएपछि बल्ल बेलुका साढे ४ बजेतिर पूर्वसभामुख घर्ती लगायतका अन्य यात्रु उडे तर सो विमान काठमाडौं नपुगी पोखरा विमास्थलमा अवतरण भयो।
विमानस्थल स्रोतका अनुसार जहाजमा इन्धन कम भएको भन्दै चालकले रिफ्यूलिङका लागि विमान पोखरा विमास्थलमा अवतरण गराएका हुन्।
तर इन्धन भरिसक्दा साँझ ५ बजिसकेकाले ट्वीनअटर उड्न नसक्ने भन्दै पोखरामै बास बस्यो। ओनसरी घर्ती लगायतका यात्रुहरू पनि पोखरामै बसन बाध्य भए।
संयोगले त्यसपूर्व नै शुक्रवार दिउँसो साढे २ बजेतिर संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराई पनि टरिगाउँ एयरपोर्ट पुगे।
उनी काठमाडौंबाट बाँकेको राँझा विमानस्थलसम्म प्लेनबाट आएको भए पनि बाँकेदेखि दाङको तुलसीपुरसम्म गाडीमा आएका हुन्।
पर्यटन मन्त्री एयरपोर्ट पुग्दा कल साइन नाइन एन– एवियुको नेपाल एयरलाइन्सको विमान ग्राउन्डेड नै थियो।
मन्त्री भट्टराईले सोधे- यो प्लेन कतिबेला उड्छ?
सँगै रहेका तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर घनश्याम पाण्डेले विमानमा उत्पन्न प्राविधिक खराबीका कारण उडान क्यान्सिल गरेर ग्राउन्डेड भएको जानकारी दिए।
त्यो देखेर पर्यटन मन्त्री भट्टराईले भने– ‘मन्त्री आएको दिन यस्ले के गर्‍यो’ यस्तो भन्दै मजाग गरे।
यति भनेर मन्त्री हाँसे ।
राष्ट्रियसभा सदस्य कोमल वली, प्रतिनिधिसभा सदस्य हिराचन्द्र केसी, मेयर पाण्डे, तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष रामप्रसाद चालिसेलगायत सबैले मन्त्रीको हाँसोमा हाँसो मिसाए।
त्यो सबै दृष्य पीडा सहन नसकेर टर्मिनल भवनको बाहिरतिर यताउता गरिरहेकी बिरामी केशरी अधिकारीले नियाली रहेकी थिइन्।
त्यसपछि पर्यटन मन्त्रीसहितको जनप्रतिनिधिहरूको टोली एयरपोर्टको धावनमार्गको स्थलगत निरीक्षण गर्दै दक्षिण मोहडामा पुग्यो।
टरिगाउँ एयरपोर्टको निरीक्षणमा पुगेका पर्यटन मन्त्री भट्टराईलाई तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर घनश्याम पाण्डेले उक्त एयरपोर्ट भौगोलिक र वातावरणीय हिसाबले नेपालकै उत्कृष्ट एयरपोर्ट भए पनि राज्यले ठग्दै आएको हुँदा तत्काल विस्तार गर्न आवश्यक रहेको बताएका थिए।
उनले टरिगाउँ एयरपोर्टलाई पाइलट प्रशिक्षण गर्ने एयरपोर्टको रूपमा विकास गर्न सकिने बताए।
एयरपोर्टको अवलोकन गरेर मन्त्रीसहितको टोली फर्कियो।
बिहानैदेखिको ग्राउण्डेड प्लेन मर्मत गर्न काठमाडौंबाट अर्कै फ्लाइटमा इञ्जिनियरहरू बेलुका ४ बजेतिर आए। उपाय नचलेपछि उनीहरू पनि फर्किएर गए। प्लेन ग्राउन्डेड अवस्थामा शुक्रबार राति त्यहीँ रह्यो।
स्थानीयले धावनमार्ग सानो हुँदा ठूला जहाज आउने वातावरण नभएकाले यात्रुहरूले यस्ता दुःख झेल्नुपरेको गुनासो गर्छन्। उनीहरू माग छ-अबिलम्व विमानस्थलको धावन मार्ग विस्तार गरियोस्।
विक्रम संवत २०११ सालमा स्थापना भएको दाङको एक मात्रै टरिगाउँ एयरपोर्ट घाँसे मैदान रहँदा समेत ३१ वर्ष सम्म नियमित चल्यो।
विमानस्थल ०४२ सालमा बन्द भयो। ०६० सालमा तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघको पहलमा फेरि खुल्यो र ०६६ सालमा बन्द भयो। त्यो समयमै विमानको धावनमार्ग कालोपत्रे भयो। त्यसपछि ०६८ माघपछि तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघको पहलमा फेरि विमान सञ्चालनमा आयो। त्यो एक वर्ष नपुग्दै फेरि बन्द भयो। गत निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले बन्द विमानस्थलमा विमान चलाउने नारा प्रमुख रूपमा उठाए।
२०७४ मा जनप्रतिनिधि आएपछि विमानस्थल ०७५ असोजदेखि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको पहलमा फेरि सञ्चालनमा आयो।
जस्को धावन मार्ग जम्मा ७ सय ५० मिटरमा मात्रै कालोपत्रे छ। हाल दैनिक दुई वटा उडान हुँदै आएको टरिगाउँ एयरपोर्टमा १८ सिटे साना ट्वीनअटर विमान मात्रै चल्दै आएका छन्। त्योभन्दा ठूला विमान आउन सक्दैनन्।
इन्धन डिपो समेत नभएको हुँदा इन्धन पनि बोकेर ल्याउनुपर्ने बाध्यताले जम्मा १४ यात्रु मात्रै एक पटकमा यात्रा गर्न पाउँछन्।
इन्धन राखेको सिटको पैसा पनि यात्रुबाटै असुल्दै आइएको छ। त्यसले गर्दा दाङ काठमाडौं भाडा झन्डै ७ हजार रुपैयाँ पर्ने गरेको छ। जो नेपालगञ्ज भन्दा निकै महँगो हो।
यत्ति मात्रै समस्या हैन। ट्वीनअटर विमान सुरक्षित पनि छैन। एउटा इञ्जिनले काम गर्न छोडे जतिबेला पनि दुर्घटनाको जोखिम हुन्छ। त्यो थाहा पाएका प्राय: व्यक्ति टरिगाउँ एयरपोर्टको यात्रा गर्न मान्दैनन्।
बरु उनीहरू बाँके र भैरहवासम्म पुगेर प्लेनमार्फत् काठमाडौं जान्छन्। पर्यटन मन्त्री काठमाडौंबाट सोझै दाङको टरिगाउँ एयरपोर्ट नआएर बाँके पुग्नुको कारण पनि यही हो। दाङ आउँदा प्राय: शीर्ष नेता पनि यही गर्दै आएका छन्। त्यसले कार्यक्रम निर्धारित समय भन्दा ढिला हुनपुग्छ।
यही कारण तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघ एयरपोर्टको धावनमार्ग विस्तार र इन्धन डिपो स्थापना छिटो होस् भन्न चाहन्छ। त्यही कुरामा ध्यानाकर्षण गराउन सहयोग पुगोस् भनेरै संघले व्यापारिक महोत्सव लगाउनु परेको बताएको छ।
महोत्सव उद्घाटन गर्न निम्त्याएर वाणिज्य संघका पर्यटन मन्त्रीलाई एयरपोर्टको निरीक्षण गराउन लैजानुको कारण त्यही थियो।
महोत्सव सुरू हुनुभन्दा पहिला तुलसीपुरमा निकालिएको शोभा यात्रामा सहभागी सयौं विद्यार्थीलाई सडकमा टरिगाउँ एयरपोर्टको विस्तार र इन्धन डिपोको स्थापनाको माग गर्दै नाराबाजी गर्न लगाउनुका करण पनि त्यही हो।
उनीहरूले ‘कहिले पूरा होला ठूलो जहाज चढ्ने रहर, इन्धन डिपो चाहियो चाहियो, हामी दाङ एयरपोर्टको विस्तार र स्तरोन्नति चाहन्छौं, नियमित विमान सेवा चाहन्छौं,’ भन्ने खालका नारा लेखेका प्लेकार्ड बोकेको थिए।
सामूहिक रूपमा एयरपोर्टको धावन मार्ग विस्तार तथा इन्धन डिपो स्थापनाको माग गर्दै सडकमा दंगाली उत्रिएको यो नै पहिलो पटक हो।
यद्यपी तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघले दोघरेमा निर्माण गरेको बहुउद्धेश्य सभाहलको भुक्तानी हुन बाँकी रकमको जोहो गर्न भन्दै महोत्सव लगाइएको छ।
संघका पूर्वअध्यक्ष विमल रिजालले भने आवश्यक परे महोत्सवबाट संकलित सम्पूर्ण रकम विमानको धावनमार्ग विस्तारमा लागाउन सकिने बताएका छन्।
पर्यटन मन्त्री भट्टराईले दाङको एयरपोर्ट विस्तार हुने बताएका छन्।
तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघले शुक्रबारदेखि आयोजना गरेको व्यापारी महोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भट्टराईले तुलसीपुरस्थित टरिगाउँ एयरपोर्टमा इन्धन डिपो स्थापनाको प्रक्रिया समेत अगाडि बढिसकेको जानकारी दिए।
एयरपोर्टको धावनमार्ग विस्तारबारे मन्त्री भट्टराईको ध्यानाकर्षण गराउन महोत्सव स्थलमै साढे १२ मिटर लामो कपडामा संकलित हस्ताक्षर र यसअघि विभिन्न चरणमा विभिन्न दलका नेता तथा मन्त्रीहरूलाई ज्ञापनपत्र पनि बुझाइएको थियो।
साथमा हालसम्म एयरपोर्टको विस्तार र इन्धन डिपो स्थापनाको लागि उद्योग वाणिज्य संघले वर्षौंदेखि सरकार प्रमुख र उच्च नेतृत्वलाई गर्दै आएका भेटघाट तथा प्रयासहरूको बारेमा तस्वीरसहतिको १०० फिट लामो व्यानर समेत मन्त्रीलाई महोत्सवमा प्रदर्शन गरिएको थियो।